isigqi Crazy zokuphila kwanamuhla kusenza njalo endaweni ethile ugijimele ukubaleka, lula ukumisela imigomo ethize futhi hook noma nge kwengobe ihlose ukufeza izinhloso kubo. Ngezinye izikhathi ngaphakathi lo pilo we khohlwa ebaluleke kakhulu - amagugu umndeni kanye namasiko. Umkhaya elingenamikhono izingalo kungaba indlela enhle kakhulu ekuhlanganiseni nomndeni wakho, futhi umsebenzi ngokuhlanganyela okudala ukwakha oyoziletha eziningi imizwelo eyakhayo. Kulesi sihloko sizozama ukuphendula umbuzo indlela ukudweba elingenamikhono umndeni izikhali.
Isinyathelo sokuqala ukuba baqonde lokho okufundiswa isibonakaliso futhi yini okusho athwala ngokwako. Kuyinto logo eyingqayizivele ngokuphelele yakhelwe ukugcizelela ukuxhunywa womnikazi wayo othile ubudala, idolobha, izwe. NgeNkathi Ephakathi izithombe ezinjalo ziye zasetshenziswa njengoba okuwuphawu oluyinhloko umkhaya, compatibilizing izici eziyinhloko uhlobo. Kodwa manje lokhu kwaziswa ekuqaleni ukululama, ngenxa umbuzo indlela ukudweba elingenamikhono izingalo umndeni, it is ziba kubalulekile.
Ngakho-ke, ijazi umndeni izikhali kufanele uthole okungenani incwadi eyodwa heraldry, ukuthola umqondo anolaka mayelana nenqubo. Ingalo ephepheni noma ephepheni kanye emakhilayoni lamanyenti (imibala, izimpawu), futhi umbusi. Ngendlela ngokuthula, ngaphambi kokuba uqale ukwakha Crest umndeni, kubalulekile ukuba abuthele ulwazi oluningi mayelana wawoyise. Mhlawumbe omunye wabo kwadingeka uphawu ayo, izakhi zazo kuyobonakala umdwebo wakho. Uma lokhu kungeke kwenzeke, ukuhlela umhlangano womndeni lapho izindinganiso zakho ezabiwe uyokwambulwa, izithakazelo nokuzilibazisa. Ngokwesibonelo, uma ukujabulela imisebenzi yangaphandle kanye nohambo, ukucinga indikimba yendaba ikamu isizinda ubhaka. Uma Nokho, njalo ngezimpelasonto ozama ukuhamba on the nature, ngesisekelo sibalo kungaba sibe umuthi noma imoto. Amalungu oluthile lomdlalo kuyafaneleka ukucabangela njengoba inketho amathuluzi besizinda esihlukile: libhola, ithenisi Racquet noma eqhweni. Ngale ndlela ungakha elingenamikhono akho izikhali, okutshengisa izithakazelo omkhaya.
Imikhaya eminingi akafunanga ezikudidayo phezu ingemuva isithombe, umane ebonisa elingenamikhono izingalo yezwe. I uwuphawu ukhozi ubukeka ngempela ngamafuphi, futhi ngesikhathi esifanayo ngempumelelo. Ngicabanga ukuthi inkinga ngendlela isibonakaliso draw ka-Russia, uma kungavela. Okulandelayo uzodinga ukhethe yisakhiwo sodumo izimpawu umndeni. Njengomthetho, lawa bofeleba lwamagama kanye nezibongo, kanye imidwebo yombusi bahlanganisa amalungu omkhaya. Isitayela oyinhloko uyibeke phezu zangokwasemuva zezinhlelo base ekhethiwe. Umqhele isibonakaliso kuyinto nomqhele omuhle, inkanyezi noma ilanga. Cedzela lesitfombe lokubhalela nhlobonhlobo: kudabuke umhlane, imihlobiso ezimibalabala, amaphethini, njll
Njengoba asebenzelana ngayo umbuzo indlela ukudweba elingenamikhono umndeni izikhali, ungakwazi uqhubekele Umbala yayo. Nokho, izindleko zokukwazi ulwazi okushiwo imibala, ngoba kulesi sikhathi kubaluleke kakhulu heraldry. Bheka encwadini ezifanele, futhi uthole ulwazi mayelana ukuhambisana shades ehlukahlukene. Kufanele ziphinde zisetshenziswe isithombe izixhumanisi olahlekile futhi umugqa Ukwakheka ukunika ukubukeka esiphelele. Njengoba ngokuvamile sasibekwa eduze elingenamikhono izingalo we Isiqubulo umndeni. Bangaze izwi lakho ozithandayo, wacaphuna incwadi noma isisho ezihlekisayo of omunye amalungu omndeni. Crest Umkhaya ngomumo.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela ukudweba elingenamikhono izingalo, futhi kalula uthole lolu phawu emangalisayo umndeni.
Arabesque - kuyinto ubuciko geometry umthetho-kubuswa